Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem azụmahịa » Ọrụ ime njem na njem nlegharị anya gbadara ihe dịka 7% na Julaị
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ụgbọ ala mgbazinye • Ịtụ egwu • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Akụkọ okomoko • News • Rail njem • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Mmekọrịta azụmahịa ka nọkwa n'otu ọkwa n'ahịa ndị dị mkpa dị ka USA, UK na China, ebe India na Australia hụrụ nkwalite na mmegharị azụmahịa.
Mmekọrịta azụmahịa na mpaghara njem na njem nlegharị anya ka na -agbanwe agbanwe.
June gosiri ụfọdụ ihe mgbake na -eso mbelata n'ime ọnwa ole na ole gara aga.
Enweghị ike ịkwaghari azụmaahịa azụmaahịa ogologo oge.
A mara ọkwa ngụkọ nke azụmahịa 69 (nke gụnyere njikọta na nnweta [M&A], nhatanha nkeonwe, na itinye ego) na mpaghara njem na njem nlegharị anya nke ụwa na July 2021, nke bụ mbelata nke 6.8% karịa azụmahịa 74 ekwuputara n'ọnwa gara aga.
Mmekọrịta azụmahịa na mpaghara njem na njem nlegharị anya ka na -agbanwe agbanwe. Ọ bụ ezie na June gosipụtara ụfọdụ ihe mgbake na -eso mbelata n'ime ọnwa ole na ole gara aga, nlọghachi azụmaahịa azụmaahịa enweghị ike ịkwado ogologo oge na July ọzọ na -atụgharị omume ahụ. Enwere ike sị na nke a bụ mmachi njem na -eme na ọnọdụ ahịa adịghị mma maka ngalaba na mba ụfọdụ.
Nkwuputa nke ịha nhatanha na nkwekọrịta M&A belatara site na 58.3% na 4.7% n'ime ọnwa Julaị ma e jiri ya tụnyere ọnwa gara aga, n'otu n'otu, ebe ọnụọgụ azụmahịa na -azụ ahịa debara aha uto nke 21.1%.
Mmekọrịta azụmahịa ka nọkwa n'otu ọkwa n'ahịa ndị isi dịka USA, UK na China, ebe India na Australia hụrụ nkwalite na ọrụ nkwekọrịta. Ka ọ dịgodị, Germany, Spain na Netherlands enwela mbelata ọrụ azụmahịa na July ma e jiri ya tụnyere ọnwa gara aga.